मिथकीय राजाको आसन्न हबिगत
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिमिथकीय राजाको आसन्न हबिगत
ओल्बाको पक्षमा प्रस्तुत गरिने तर्क सुनेर कन्टिर–बाबू हैरान छन् । ओल्बाको गुणगान गाउनेले अनेक फुर्का जोडेर ख्वामितको भक्ति गर्न कति सकेका ? फोहोर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो ।
बहसका क्रममा एक जना वकिलले बकेछन् … प्रधानमन्त्री ओलीसँग श्रीपेच पो छैन, राजकीय शक्तिमा उहाँ राजाभन्दा कम हो र ?
ती वकिलले के सोचेर, के गुनेर यस्तो भने त्यो त कन्टिर–बाबूलाई थाहा छैन । तर रामोराम ख्वामित भक्ति–भजनको योभन्दा निकृष्ट उदाहरण र शब्दावली पाउन दुर्लभ छ गणतान्त्रिक नेपालमा ।
ख्वामितको चाकडी सबैलाई उछिनेर बजाउने ती वकिलको टिप्पणी राणाकालका हुक्के, ढोके, पछुवाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने प्रशस्तिभन्दा दुई इन्च बढी नै रहेको कन्टिर–बाबूको ठहर छ ।
यसको सोझै अर्थ भयो कि हाम्रा ओल्बा राणाकालीन, पञ्चायतकालीन राजा–महाराजाजस्तै शक्तिशाली छन् । उनी संविधानभन्दा माथि छन्, उनलाई कुनै कानुनले छेक्दैन ।
कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ, राजनीतिक भाषामा भन्दा ओल्बालाई राजासँग तुलना गर्नु चाकडी ठानिएला तर कानुनी रूपमा सार्वजनिक फौजदारी अपराध हो । तर कन्टिर–बाबूले अपराध ठानेर के गर्नु जब ख्वामितहरूलाई त्यही मन परिरहेको छ भने ।
निरङ्कुश शासकलाई चाकडी र गुणगान कति मन परेको ? यो प्रसङ्गमा कन्टिर–बाबू समाजमा प्रचलित एउटा कथा सम्झिन्छन् । एकादेशमा एक जना राजा चाकडीबाजहरूको कुरा सुनेर आफूले सुन्दर वस्त्र धारण गरेको छु भन्नेमा विश्वस्त भएछन् ।
उनी त्यही भ्रमयुक्त विश्वास बोकेर सहरमा नाङ्गै हिँड्न थालेछन् । बाटोमा भेटिने जतिलाई आफ्नो वस्त्र कस्तो छ भनेर सोध्थे । सुरुमा देख्नेले उनलाई नाङ्गै देखे र भने– महाराज हजुरको शरीरमा वस्त्र नै छैन । जब यस्तो अनपेक्षित उत्तर सुने राजाले ती व्यक्तिलाई तत्काल मृत्युदण्ड दिए ।
यो कुरा खरमा आगोजस्तो चारैतिर फैलियो । राजा सठियाएछन्, वास्तविक उत्तर सुन्न चाहँदैनन्, सही कुरा गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन्छन् भन्ने खबर फैलिएपछि जनता सचेत भए, जीवन बचाउन झुठो बोल्न थाले ।
उप्रान्त राजाले आफ्नो वस्त्रबारे सोध्दा जनताले ‘आहा कस्तो राम्रो वस्त्र !’ भन्न थाले । कथित वस्त्रको प्रशंसा गर्नेलाई राजा पुरस्कृत पनि गर्थे । यसो गर्दागर्दै राजाले आफ्नो कथित सुन्दर वस्त्र जनतालाई देखाउन राज्यभर नाङ्गै डुले ।
यतिबेला हामीकहाँ रूप फरक होला तर प्रवृत्तिमा उही नियति हुबहु प्रदर्शित भइरहेको छ । कन्टिर–बाबूलाई लागिरहेको छ– पुरस्कार, आभूषण, पद, नियुक्ति आदिको लोभमा केही व्यक्ति सत्य बोलिरहेका छैनन् । जो बोल्छन्, ती दण्डित भइरहेका छन् ।
तर कन्टिर–बाबू ओल्बाको हबिगत मिथक कथाको राजाजस्तो नहोस् भनेर लगातार सत्य भन्ने आँट गरिरहेका छन् । उनी परिणामको प्रतीक्षामा छन्, हेरौँ के हुन्छ ?
भक्ति मिथक राजा